TimeTrade: Ka ndi mmadu dikwa ndu oge gi! | Martech Zone
M ka na-elu ilu banyere Blackberry ilo Osisi ma gbue ya. Ọ bụ ngwá ọrụ dị egwu na enwebeghị m ike iji dochie anya… ruo ugbu a. M mere n'ofe saịtị nke na-eji TimeTrade si Pịa ka ịtọọ oge Njirimara ma chọpụta teknụzụ bara uru ịkekọrịta.
Obere ego m na-etinye na ya Timetrade kwesịrị ya nke ọma n'ihi na ọ na-ewepụ mkparịta ụka azụ na azụ na ndị ahịa m ma ọ bụ atụmanya na ịmata ụbọchị na oge ị ga-ezute. Usoro a na-arụ ọrụ ahụ ma na-ewusi ya ike na ngwugwu nke mbụ, n'agbanyeghị, na-enye gị ohere itinye a Pịa Schetọ oge bọtịnụ ozugbo na weebụsaịtị gị! Nke a bụ nnukwu atụmatụ nwere ike ịbawanye ntụgharị dị ka TimeTrade na-ekwu n'okpuru:
Atụmanya nke na-eme site na ịhazi oge dị mkpirikpi maka ozi ma ọ bụ enyemaka ahịa bụ ndị ruru eru karị ma dị njikere ịnwe mkparịta ụka ịzụta. Nke a na-ebelata usoro ịre ahịa site na ịwụfu "elu" nke ọfụma ahịa ma nweta ikike ịrụ ọrụ na usoro ire ere. Ndị ahịa TimeTrade na-ahụkarị mmụba nke 25% ma ọ bụ karịa na ntughari-na-ere ma belata usoro ahịa site na 40% ma ọ bụ karịa.
Yabụ na atụmanya na-abanye na saịtị gị ma nwee mmasị. Kama ịnyefe ụdị arịrịọ, ha pịa ka ịtọọ oge na ịtọọ oge atọrọ nke a na-agagharị na onye ziri ezi na otu gị. Kedu ka nke ahụ si dị mma? No fuss, no muss… kalenda gị na-emelite, ahịa gị CRM na-emelite, na gị ahịa akpaaka si nurturing mkpọsa ugbu a kwụsịrị. Emezuru ihe a niile na-enweghị onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị na-eweli mkpịsị aka!
TimeTrade jikọtara ya na Kalịnda Google, Hubspot, Marketo, Eloqua na Salesforce. Ya mere, ọ bụghị naanị na ndị ndu gị ga-edobe nhọpụta ahụ, mana ozi ha dị na CRM ma ọ bụ usoro akpaaka ahịa gị ga-emelitekwa!
Tags: pịa ịtọọ ogeoge
Oge ahia na-amasị m, ezigbo ọrụ.
Hey Doug, daalụ maka nyocha ahụ dị egwu. Mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ajụjụ ọ bụla na TimeTrade!
Ọkt 8, 2014 na 6:41 AM
Oge ahia nwere oke ntụpọ dị ka ngwaahịa na ụlọ ọrụ. Isi ihe mere ndị mmadụ ji achọ ngwaahịa dị ka nke a bụ maka mmekọrịta – ka ndị ahịa nwee ike ịga wee webụ, hazie oge, na ọ bụ ya. Mmekọrịta zuru oke adịghị adị, agbanyeghị, ọbụlagodi maka Calendar.app. Enweghị m ike ihichapụ nhọpụta na Kalịnda ma wepụ ha na TimeTrade. M ga-aga na SITE iji jikwaa kalenda m. Ekwuru m na nke a abụghị "mmekọrịta" - na "mmekọrịta" pụtara "mmekọrịta" mana enweghị nkwado. Mgbe m rịọrọ maka nkwụghachi azụ dịka nke a bụ atụmatụ a kpọsara, agwara m na nkwekọrịta ahụ anaghị anabata nkwụghachi. Kedu ụdị ụlọ ọrụ na-enye azịza ndị ahịa dị ka nke ahụ? Aga m ahapụ TimeTrade mgbe afọ m zuru. Azụkwana ngwa ahịa a.
Anika Davis kwuru
Nov 24, 2014 na 9:57 PM
Ngwá ọrụ a bụ ọtụtụ ihe nke kemfe-dandy ihe mana ọ bara uru ma baa uru n'otu oge ahụ. Oge ahia mere ezigbo ọrụ na-echepụta ihe a dị mma. Enweghị nchekasị na ịhazi usoro ihe omume. Nke a akara na-ekwu ya niile, "Ya mere, ọ bụghị naanị na ndị ndu gị ga-etinye nhọpụta ahụ, mana ozi ha na CRM ma ọ bụ usoro akpaaka ahịa gị ga-emelitekwa!".